जीवनमा कहिल्यै घुस नखाने कर्मचारी ! - Merodesh.news
जीवनमा कहिल्यै घुस नखाने कर्मचारी !
२६ कात्तिक २०७५ November 12, 2018
विराटनगर। घुस नखाने र घुसको बिरोधमा खुलेर बोल्ने सरकारी कर्मचारीहरु बिरलै भेटिन्छन । तर सह सचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल त्यस्तै बिरलै कर्मचारी हुन जसले आज सम्म घुस त खाएनन खाएनन झन घुस बिरुद्धको अभियानमा निरन्तर खुलेर आफले सक्ने सचेतना अभियान चलाइरहे ।
२०३८ सालमा दिपायल सिलगुडी स्थित अञ्चल अदालतमा सुब्बाबाट आफनो जागिरे जीवन सुरु गरेका हुन उप—सचिव सञ्जेलले । त्यसपछि उनि सिरहा, धनकुटा, इलाम, तेह्रथुम मोरंग लगायत शिक्षा , जनस्वास्थ्य , निर्वाचन लगायतका जिल्लादेखी मन्त्रालयमा बसेर पनि लामो समय सेवा गरे । उनि जहाँ जान्छन त्यहाँ कर्मचारीहरुको ढिलासुस्ती र घुस्याहा प्रबृत्तिको सबैका अगाडी खुलेर बिरोध गर्नेगर्छन ।
पशुसेवा बिभागमा हुँदा सञ्जेलले एकै चोटी भ्रष्टचार आरोपमा २३ जना कर्मचारीको जागिर खाइदिएका थिए । जागिर जोगाइदिने अनेक दवाव र प्रलोभन आउदा पनि उनले टेरेनन । सहकारी बिभागमा हुँदा भ्रष्टचार आरोपमा ४५ जना ठगहरुलाई जेल पठाउन सफल भए । एकै चोटी २३ जना कर्मचारीको जागिर खाने अधिकृत भनेर भनि सञ्जेल कहलिन्छन ।
हाल बिराटनगर स्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा भर्खरै बरिष्ठ श्रम अधिकृतमा सरुवा भएर पुगेका सञ्जेलले आफनो कार्यकक्षको कुर्सी माथि सबैले देख्ने गरि भित्तामा लेखिदिएका छन ,—‘कतै तँपाई घुस दिन आउनु भएको त हैन हो भने हामी त घुस खादैनौ तपाई उल्टै समस्यामा फस्नु होला नि ।,’
३५ बर्ष बढी समय सरकारी सेवामा बिदाई सकेका कर्मचारी सञ्जेलले नेपाली कर्मचारीको धेरै चरित्र देखिसकेका छन । उनि देश बिगर्नुमा नेताहरु मात्र नभएर कर्मचारीहरुको लोभी र अभिमानि प्रवृत्ति नै मुख्य दोषी भएको मान्छन । कर्मचारीले लोभ नगरेर घुस नखाएमा नेता र मन्त्रिले आँट गर्न सक्दैनन । सधैभरि पदमा बसिरहन पाउनुपर्छ भन्ने कर्मचारी मानसिकता दोषी भएकोले अव प्रशासन यन्त्रको ब्रेन पुरै वास गर्नुपर्ने अनि मात्र प्रशासन यन्त्र स्वच्छ हुने उनको बुझाई छ । कर्मचारीहरुकै कारण नेपालको प्रशासन यन्त्र घुसखोरी र अल्छि भएको उनि मान्छन ।
घुस, पितौरी, कमिसन, प्रतिशत, बक्सिस, इनाम, रिस्वत, नजराना सबै घुसका प्रकार भएको र कर्मचारीहरुले बिभिन्न बहानामा घुस लिने गरेको उनको अनुभव छ । आफनो खराव चरित्रकै कारण, घुस्याहा, छल्याहा, ठगाहा आदि अनेक नामले कर्मचारीहरु बदनाम भएको उनि मान्छन । भन्छन, — “के कहाँ र कसरी घुस खानुपर्छ भनेर सिकाउने नै कर्मचारी हो त्यो मन्त्रिलाई त के थाहा हुनु र ?”
सहसचिव सञ्जेल खुलेर घुसको बिरोध गर्ने मात्र व्यक्त्ति मात्र हैनन, भ्रष्टचार बिरुद्धका सचेत अभियन्ता पनि हुन । उनले आफना दुई वटा फेसबुक एकाउन्ट मार्फत निरन्तर भ्रष्टचार बिरुद्ध वकालत गर्दै आएका छन । घुस खानेहरुले नै देश बिगारेकोले पाप लाग्ने उनको भनाई हुन्छ । भ्रष्टचार बिरुद्ध उनि गीत कबिता पनि रचना गर्नेगर्छन । उनका फेसबुक वालमा भ्रष्टचार बिरोधी गीत कबिताहरु पढन सकिन्छ । सञ्जेल घुस दिने सेवाग्राही र लिने कर्मचारीबारे जानकारी भए तुरुन्त पत्रकारहरुलाई बिबरण इमेल गरिदिन्छन र सोसल मिडियामा पनि सावृजनिक गरिदिहाल्छन । यसैले घुसको बिषयमा कुरा गर्न उनिसँग मातहतका मात्र नभएर उपल्ला कर्मचारीहरु समेत डराउँछन ।
मन्त्रालयमा हुँदा सचिवले उनलाई सरुवा बढुवामा घुस उठाउन भने । तर उनले पटक पटक भन्दा पनि मानेनन । आफुले भनेको नमानेको भन्दै सचिव उनी सामु कडकिए । नेपाल आर्मीको जागिर खाएर छाडेर नीजामति सेवामा प्रबेश गरेका सञ्जेल पनि के कम दिए लात्ताले सचिवलाई । कुरो मन्त्रि सम्म पुग्यो । उनले खुल्ला स्पिष्टिकरण दिए, — “मलाई घुस उठाउन लगाउने कुरा मैले सहन सकिन घुस खानु भनेको आमाको रगत खाए सरह हो बरु जागिर छाडछु तर घुस खान्न ।”
मन्त्रिले उनलाई सम्झाएर पठाए तर जागिर गएन । सम्झदै सञ्जेल भन्छन नराम्रो काम गर्दा पो जागिर जान्छ त राम्रो काम गर्दा किन जागिर जान्छ कसैले घुस संकलन गर, खा भन्दैमा खानु भनेको आफनै दोष होइन र ?, सञ्जेल लामो समय शान्ति मन्त्रालयमा बसेर अधिकृतका रुपमा काम गरे । त्यहाँ रहँदा उनले चार जना प्रधानमन्त्रिलाई बिफ्रंग गर्ने अवसर पाए । एक जना प्रधानमन्त्रि त मेरो कुरा सुनेर धुरुधुरु रोएका थिए ,— सञ्जेल सम्झन्छन ।,
जापान लगायत बिभिन्न देशमा गएर सरकारी सेवा प्रबाह र शुसासनबारे प्रशिषण लिन र दिन भ्याइसकेका सञ्जेल बिराटनगर निवासी हुन । बिराटनगर स्थित क्षेत्रिय निर्वाचन कार्यालमया रहेर सञ्जेलले २०७० को निर्वाचन , स्थानिय तहको निर्वाचन शान्ति पुर्वक सम्पन्न गरे । त्यहाँ रहँदा नत उनले कसैसँग घुस खाए नत अरुलाई खान दिए । कसैसँग डगेनन । समयको पालना गर्ने सिडिओलाई समेत उनले चुनौती दिए ।
निर्वाचनको समयमा २८ पटक बिना भत्ता जिल्ला भ्रमण गरे । बजेट भन्दा धेरै नमुना मतदान सम्पन्न गराए । उनलाई भने अनुसार नगरको भन्दै सोझै सचिव स्तरिय निर्णयबाट सरुवा पनि गरियो । तर उनि सर्बोच्च गए । मुद्दा जिते र फेरि निर्वाचन कार्यालयमै आएर पारदर्शी र शुसासन युक्त्त ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराएर योगदान दिए ।
हाल उनि कार्यरत रहेको बिराटनगर स्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालय आफैमा बदनाम ठाउँ हो । उनलाई सरकारले लागू गरेको नयाँ श्रम ऐन उद्योगहरुमा कार्यन्वयन गराउने चुनौती छ । सरकारलाई खरिद गर्ने उद्योगपति, भ्रष्ट नेताहरु र बिबादित ट्रेड युनियन अनि लोभी कर्मचारीहरु सबैसँग जुध्नुछ उनले ।तर उनि यसबारे प्रतिबद्ध छन । कसैसँग नडगी मजदुरको हकहितमा काम गर्दै जाने उनको अठोट छ । र, उनले ठूला उद्योगहरुको अनुगमन गरेर यसको सुरुआत पनि गरिसकेका छन ।
श्रम ऐनको व्यस्थाबारे अन्र्तक्रिाय पनि थालिसकेका छन । अर्कोतिर यही मंसिरदेखी बैदेशिक रोजगारको अनुमति पनि उनको कार्यालयले दिन थाल्छ । यसैले श्रम अनुमति लिँदादिँदा हुने बिचौलियाहरुको बिगबिगीलाई पनि उनले पन्पिन दिनुछैन । घुसप्रति प्रतिबद्ध प्रस्ट अभियन्ता समेत रहेका निष्ठावान हक्की कर्मचारीहरुका रुपमा चर्चित भैसकेका सञ्जेल भन्छन — “मलाई महंगा गाडी चढने र ठाँटबाँठले बाँच्ने रहर छैन श्रीमान श्रीमती दुवै जागिरे छौ जति पाउछौ त्यसैसबाट सन्तुष्ट छौ, मुरमुरिनेहरु मुरमुरिरहुन ।”